नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लाभांश घोषणा, कति दियो बोनस शेयर ? – Insurance Khabar
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लाभांश घोषणा, कति दियो बोनस शेयर ?
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७९, आईतवार १०:५९
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असार ५ गते विहान ८ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस शेयर र बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश दिने भएको हो । कम्पनीले लाभांश स्वीकृतिका लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ को उपदफा २ को प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नेछ । साथै उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकार नियामक निकाय बीमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त भई साधारणसभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित बोनस शेयर ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ वितरण पछि चुक्ता पूँजी १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले यस भन्दा अगाडी २०७६/७७ सम्मको मुनाफाबाट १६.५ प्रतिशत बोनस शेयर र २.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । आइपिओ निष्काशन पछि कम्पनीले अहिलेसम्ममा २४.२६३२ प्रतिशत लाभांश हुनेछ ।